Landa i-Tom Airbus A300-600ST Beluga FSX - Rikoooo
Usayizi 32.4 MB
Play 57 218
Umbhali: UThomas Ruth
Kubuyekeziwe on 13 / 08 / 2018: Prepar3D v4 ehambisanayo, entsha repaint Airbus Industries
Kubuyekeziwe on 07 / 29 / 2015: Ukuvumelana P3D i-v1 - v2, FSX engeza okusha i-Red Australia Australia Airlines + ukubukwa kwekhamera: I-13 ukubukwa kwangaphandle kwendiza, i-2 ngaphakathi kokubukwa kwe-cargo bay kanye nokubukwa kwe-4 VC.
imodeli evuthiwe, lokhu indiza sengathi kuvela kwelinye izwe exakile elifana the whale ogama lakhe Beluga. Kufaka inkambiso imisindo, a functional 3D abanikeze asebenza nabo, funda manual (FCM.pdf) ukusebenzisa kahle izinsimbi on ebhodini.
I-Airbus A300-600ST (i-Super Transporter) noma i-Beluga inguqulo ye-A300-600-body body-body body yangaphakathi eguqulelwe ukuphatha izingxenye zezindiza kanye nempahla engaphezulu noma engafanele. Kwakubizwa ngokusemthethweni ngokuthi iTrans Transter ekuqaleni, kodwa igama elithi Beluga laziwa futhi manje selithathwe ngokomthetho.
Nazi izinqubo bevula iminyango yangaphandle: